Ny Samsung Galaxy Fit dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana | Androidsis
Tamin'ny hetsika fampahafantarana azy tamin'ny volana febroary, izay nahafantarantsika ireo finday avo lenta, namela antsika finday vaovao ihany koa i Samsung taranaka azo anaovana akanjo. Taranaka izay mivarotra tsara eny an-tsena. Anisan'ireo vokatra navelan'ny orinasa koreana anay Ity no fehin-tànanao vaovao, ny Galaxy Fit. Fehin-tànana izay efa natomboka tamin'ny fomba ofisialy eo amin'ny tsena Espaniôla.
Ity Galaxy Fit ity dia tsy tonga irery, satria ny kinova fanampiny dia natomboka ihany koa, izay ny Fit E. Io dia karazany iray amin'ny brasele izay tonga miaraka amin'ny habe kely kokoa noho ny voalohany, fa amin'ny fitsipika dia afaka manao toy izany koa isika roa.
Misy ihany koa ny fahasamihafana eo amin'ny tontonana izay ampiasaina, tsotra kokoa noho ny Fit E. Noho izany, ity bracelet ity dia misy vidiny mora azo any Espana. Satria azo atao izany vidio amina magazay 39 euro fotsiny, koa amin'ny Internet toy ny amin'ny amazona. Fehin-tànana tsara, miaraka amin'ny vidiny tena manintona.
Etsy ankilany manana ny Galaxy Fit isika. Fehin-tànana miavaka amin'ny fananana tontonana AMOLED, izay tsy isalasalana fa mahatonga ny vidiny ho avo kokoa. Izy io koa dia miavaka amin'ny fanoherana ny rano sy ny fananana mari-pahaizana miaramila, MIL STD 810G. Ka fantatsika fa fehin-tànana matanjaka io.
Ny vidin'ity Galaxy Fit ity amin'ny famoahana azy any Espana dia 99 euro. Azontsika atao ny mividy azy io amin'ny magazay ara-batana sy an-tserasera, azonao atao mividy eto amin'ny Amazon. Izy io dia aseho ho toy ny fehin-tànana tsara, izay hanohizana ny fampitomboana ny fisian'i Samsung amin'ity ampahany amin'ny fitafiana ity.
Safidy roa vaovao ho an'ireo mpampiasa mitady akanjo azo ovaina, saingy tsy mila smarwtatch. Ireo Galaxy Fits dia manana ny maha-mpivarotra azy rehetra tsara indrindra. Amin'izay mba Ho hitantsika ny valiny azon'izy ireo tamin'ny fandefasana azy tany Espana. Ahoana ny hevitrao momba ireo fehin-tanana ireo amin'ny marika?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana ny Galaxy Fit sy Fit E
Hanolotra antso am-peo ny WhatsApp Web
IDC dia hanavao ny tarehimarika fandefasana Xiaomi ho an'ny Q2019 XNUMX amin'ny herinandro ambony